मङि्सर २०, २०७५ Bigul Media | PS
नेपालमा पहिलोपटक गाडी भित्र्याउँदा बोकेर ल्याइएको थियो भन्दा तपाईं पत्याउनुहुन्न होला । तर, यो सत्य हो ।
इतिहासअनुसार गेहेन्द्र शम्शेरले काँधमा बोकाएर पहिलोपटक गाडी त्यसबेलाको नेपाल (हालको काठमाडौं) भित्र्याएका थिए । गाडीका सौखिन राणाले आफ्नो प्रयोगका लागि यसरी गाडी ल्याएका थिए । उनले फोर्ड कम्पनीको गाडी नेपाल भित्र्याएका थिए ।
तर, त्यसरी बोकेर नेपाल ल्याएको गाडीमा बत्ती थिएन । यद्यपि, गेहेन्द्र शम्शेर स्वयं वैज्ञानिक भएकाले उनले आफैं गाडीमा बत्ती जडान गरेका थिए ।
इतिहासमा यो दाबी गरिएको छ कि, नेपालमा गाडी चढ्ने पहिलो प्रधानमन्त्री वीर शम्शेर नै हुन् । इन्द्र जात्राका दिन राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ वीर शम्शेरले नेपाल भित्रिएको पहिलो गाडी एक भव्य समारोहबीच चढेको बताइन्छ ।
तर, इतिहासमा यो पनि दाबी गरिएको छ कि, गेहेन्द्रले काठमाडौं गाडी भित्र्याउनुभन्दा अघि नै नेपालको चितवनसम्म गाडी आइसकेको थियो ।
चन्द्र शम्शेरको पालामा चितवनको कसरासम्म एक अंग्रेजले सिकार खेल्न आउँदा गाडी नै लिएर आएका थिए । वि.सं. १९७८ सालमा बेलायतका राजकुमार एडवर्ड सिकार खेल्न भारतबाट चितवन कसरा आउँदा उनले आफ्नै गाडी लिएर आएका थिए ।
उनैको गाडी देखेपछि पछि राणाहरूले पनि गाडी भित्र्याएका थिए भनिन्छ । उक्त गाडी काठमाडौंसम्म बोकेरै ल्याइएको थियो ।
काठमाडौंमा गाडी ल्याउनकै लागि वीरगन्जदेखि भीमफेदीसम्म नयाँ सडक खनिएको थियो । पछि सोही बाटोबाट सर्वसाधारणले काँधमा बोकाएर काठमाडौंसम्म लैजान्थे ।
इतिहासअनुसार वि.सं. २०१३ सालमा त्रिभुवन राजपथ काठमाडौंसँग जोडिएपछि काँधमा गाडी बोकेर ल्याउन छाडिएको थियो ।
प्रकाशित : बिहिबार, मङि्सर २०, २०७५१८:०७
संसारका केही यस्ता दुर्लभ तस्बिर (फोटो फिचर)